I-Bluetooth 5 kabini isantya sokudlulisa kunye noluhlu olukhulu olusele lusezandleni zabavelisi | IPhone iindaba
Alithandabuzeki elokuba ukuba sithetha ngeBluetooth kwizixhobo ezikhoyo, into yokuqala ethi qatha engqondweni kukunxibelelana okukhawulezayo, okulula nangokufanelekileyo kokuthumela idatha, umculo, imifanekiso, njl.njl. Unxibelelwano lweWi-Fi. Namhlanje kufike iindaba malunga nenguqulelo entsha eyenzelwe phucula isantya sokudluliselwa kwedatha ngokuphindwe kabini kule yangoku, ukuphucula umgama ukuya kumaxesha ama-4 kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwizixhobo.
Kucacile ukuba xa sidibanisa ibluetooth kwii-headphone zethu, iimoto, izixhobo, njl., Ibhetri yinto yokuqala enesiphene kuyo. Kungenxa yoko le nto ukuphuculwa kuphunyezwe yi Iqela elinomdla ngokukodwa (SIG) zihambelana ngokuthe ngqo nokusetyenziswa kwamandla ukongeza ekuphuculeni kakhulu isantya sokudlulisa kunye noluhlu.
I-Bluetooth 5 sele isesandleni sabavelisi abaphambili ukuze bakwazi ukuyiphumeza ngokuthe ngqo kwizixhobo zabo ezintsha, into abayi kuqalisa ukuyenza kwiimodeli esele zenziwe okanye ezikwisigaba semveliso, kodwa iimodeli zokuqala ezinolu hlobo lutsha lweBluetooth kulindeleke ukuba zifike ngo-2017 ziphuculwe.
Oku kuyakuphucula ukusebenza kwale teknoloji ifunyenwe kwiprotocol 4.2 namhlanje. I-Bluetooth 5 ikwabandakanya ukuphuculwa okunceda ukunciphisa ukuphazamiseka kwezinye iitekhnoloji ezingenazingcingo yiyo enye indawo enomdla wokuyijonga kwindawo ezivaliweyo, emsebenzini, ekhaya, njl. Ukuba, ukongeza, isantya sokuhambisa ifayile siphindwe kabini, uluhlu lwangoku luphuculwe kwaye ukusetyenziswa kwamandla kungongezwa njengokwamkela. Ndiyathemba ukuba abathathi xesha lide ukuqala ukuyiphumeza, ngelixa oku kusenzeka ungafumana ulwazi oluthe kratya malunga netekhnoloji kwi iwebhusayithi yeBluetooth esemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Bluetooth 5 ngesantya esiphindwe kabini sokudlulisa kunye noluhlu olukhulu olusele lusezandleni zabavelisi
I-Apple ihlaziya uluhlu lwezithuthi ezihambelana neCarPlay